2019 ~ रञ्जन तिमिल्सैना
धन्य डाक्टर !
एयरफोन बाट गीत सुन्दै थिए, दाँया कानको श्रवण क्षमता लगातार कम हुदै गयो ।
डक्टर का गाको
कान नै खराव हो । अप्रेसन गर्नपर्ने रे !
त्यै एयरफोन हरायो ।
तनाव भुलाउन अर्को एयरफोन किने । अचानक कान त ठीक भयो ।
अनुसन्धान गर्दा पहिलेको एयरफोनको दाँया साईड बिग्रेको रहेछ ।
डाक्टरको सल्लाह मानेको भा कान त चिलिम् ।
यउटै उत्पादन परेछन् दुवै वस्तु ।
धन्य डाक्टर साव । तिमी नी नमूनानै रैछौ ।
अचम्मै बाईक हाँस्यो😍😍, नहाँसोस त कसरी १० लिटर पेट्रोलको कुपन जो पाएको छ । हिज अस्ती घ्यार-घ्यार गर्दै बन्द हुँदा इन्जिन माथिको स्वीच जो उठाउन पर्दथ्यो । आज स्वीच नी आरामले जमिन हेरी रहेछ, गति नी औषत भइरहेछ ।
गन्तव्य लामो अनि तीव्र गति नरोकी दौडने, घडीको सुई जस्तै । तर आज सेल सकिए झै भाछ किनकि वेग जो कम छ । कुनै हतार, आपत विपद् छैन ।
खुसी हुन कुनै ठूलो कारण नै चाहिन्न, आफैलाई कर पनि लाग्ने र तिर्न पर्ने नमस्ते क्रेडिट पाउँदा त उन्माद खुसी हुने म आफ्नै बाइक हाँस्दा कसरी मौन रहन सकुँ । यहाँ त खुसी डवल, हाँसो चौवल वाइकका नसा नसा हड्डी हड्डी हाँसीरहेछन । मन नी हर्षित भैरहेछ । सोचिरहेछु-सडकमा गएर कसैलाई लिफ्टको अफर गरौ र भनौ सेवा नै परम धर्म हो, चाहे गफै किन नहोस् ।
गोजीमा पैसा हुँदा होस् वा नहुँदा १/२ लिटर बढाएर त हालिएन प्राय । खास भनौ त सवै भागको खिया नी भिज्न पाउदैन होला आफ्नो हलाईले । तर अचानक आजत हाँस्यो मोरो हाँसोको आवाज निकाल्न सक्ने भए चिच्चाएर भन्थ्यो होला छिमेकीले सुन्ने गरी आज दुनियामा सबैभन्दा बढी खुसी स्वयम् उ छ भनेर, हल्लाइ हल्लाइ भर्न जो पाएको छ । कुनै भाग होस नभिजेको अहं छैन । ५०० किलोमिटर यात्राको असल साथी हुने भयो चाहे मर्निंगवाक होस् चाहे चाहे भिजिट ।
कतिपय अवस्थामा रकम र सामानको तुलन गर्न सकिन्न जस्तै ११० रुपैया र रु ११० को पेट्रोल भलै ११० रुपैयाले अन्य कुनैपनि सामान जो किन नआओस् । त्यसो त कति चिया गफमा २/३ सय रुपैया नी खर्च भए होला तर एक थोपा पेट्रोल फाल्तु खर्च भाको छैन । दौडेरै सहयोग गर्या छ ।
प्रत्येक थोपामा मलाई सहयोग गर्ने, दैनिक आधाआधि समय सँगै विताउने मेरो प्रीय आज अचानक अघाएर पेट मिचिमिचि हाँसीरहेछ मुसुमुसु । त्यसको गतिमा औषतपना आइरहेछ, टाइम- टाइममा खित्का छोडिरहेछ । धन्य डोनर 😄😄 मेरो बाईकलाई यस अवसरका लागि । मेरो बाईक साँच्चै हाँस्यो हाँसिरहोस् । बसन्तमा कोइलीजस्तै, पिँजराबाट निस्केको चरीजस्तै, पूर्णीमाको जुन जस्तै, असारेको जुनकिरीजस्तै, वर्षातको इन्द्रेणी जस्तै रमाईरहोस् । हरेक सफलताको सहयात्री बनोस्, मुस्कानमा कहिल्यै कमि नहोस् प्रीय १२५cc साईन् ।